ZIMBABWE - Titanium Distributor & Stockist
Tiri vaitungamirira yose Distributor & stockist pamusoro Titanium , uye mapiyona mukuunza kuburikidza paIndaneti chitoro titanium alloys uye zvaanonyatsogona zvokuvakisa vane ngura nemishonga , kupisa kuramba , mukuru simba nezvimwe akaoma ehupfumi . Our paIndaneti chitoro www.ti-shop.com kutakura widest siyana hukuru uye mamakisi ari Wire / Bar / Rod / Sheet / Plate / angazvidzvisa / Tube / Zvikwepa .
Tinoshumira siyana vatengi mumaindasitiri siyana kusanganisira , Africa , Research mumarabhoritari , Fabricators , Aerospace , Medical anodyara , Motorsport , Prototyping , Chemical kubudiswa Plants , Oil & Gas , Food kugadzira .
zvaanonyatsogona wedu ari kutengesa zviduku zvakawanda . Nesuwo kupa makuru kwazvo pana anoyevedza mitengo vane pfupi Delivery nguva .